परपुरुषसँग पल्केकी श्रीमतिलाई घरभित्रै बन्द गर्दा ज्यान गुमाउनु पर्यो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
परपुरुषसँग पल्केकी श्रीमतिलाई घरभित्रै बन्द गर्दा ज्यान गुमाउनु पर्यो
एजेन्सी । फेसबुकका माध्यमबाट उनीहरुबीच मित्रता भएको थियो। थाहा भएन, कहिले उनीहरुबीच प्रेम भयो । उनी विवाहित महिला थिइन् । तर, प्रेममा उनलाई केहि देखिएन । अन्धो प्रेम । उनी प्रेमको नाउमा अँझै अगाडि बढिरहिन् ।
र यसपछि उनको प्रेमीलाई उनको श्रीमान तगारो बन्न थाल्यो । आखामा बिझ्याउन थाल्यो । यही बिन्दुबाट उसले प्रेमिकाको श्रीमानलाई आफ्नो प्रेम यात्राबाट हटाउने षडयन्त्र बनाउन शुरु गर्यो । र एक दिन विवाहित प्रेमिकाको श्रीमानलाई उसले मृत्युको निन्द्रमा सुताईदियो ।
हत्याको यो सनसनीपूर्ण घटना भारतको राजधानी दिल्लीको हो। जहाँ गीता कोलनीमा बस्ने एक महिलाको मित्रता फेसबुकका माध्यमबाट बुलन्दसहर बस्ने निखिल चौधरीसँग भयो । विस्तारै कुराकानी शुरु भयो । मित्रता भयो । दुबै अब भेट्न पनि थाले । विवाहित भए पनि महिला आफ्ना श्रीमानसँग लुकेर निखिलसँग भेट्थिइन् ।
एक दिन महिलाका श्रीमान रोहितलाई श्रीमतिको करतुत थाहा भयो । यसपछि रोहितले आफ्नी श्रीमतिलाई घरबाट बाहिर जान प्रतिबन्ध लगाई दियो । यस कुराले निखिल निकै रिसायो ।
प्रहरीका अनुसार निखिल ती महिलालाई यति माया गथ्र्यो की त्यसका लागि उसले महिलाका श्रीमानलाई सदाका लागि बाटोबाट हटाउने षडयन्त्र रच्यो ।
यसपछि अवसरको खोजीमा रहेको उसले मंगलबार उसले साथीसँग मिलेर कृष्णनगरमा रोहितलाई गोली हानेर मारिदियो । त्यो बेला रातीको १२ बजेको थियो र रोहित अटोबाट घर जाँदै थियो ।
हत्याको सूचना पाएपछि प्रहरी घटनास्थल पुग्यो र शव कब्जामा लियो । त्यसपछि पोस्टमार्टमका लागि शवलाई अस्पताल पठाइयो ।
प्रहरीले जब हत्याबारे अनुसन्धान शुरु गर्यो, निखिल बारे थाहा भयो । जब प्रहरीले निखिलको मुभमेन्ट चेक गर्दा सो दिन निखिल कृष्ण नगरमै रहेको पुष्टि भयो ।
यसपछि प्रहरीले उसलाई पक्राउ गर्यो । प्रहरीले पक्राउ गरेपछि निखिलले अपराध स्वीकारसमेत गरेको छ । तर, उसले आफ्नी प्रेमिकालाई असिमित प्रेम गर्ने पनि बतायो । उसले आफु र प्रेमिकाबीच आउने जो कोही पनि मारिने चेतावनी दियो । हाल निखिल प्रहरीको हिरासतमा छ ।